Ny Ultimate Torolalana ho an'ny Italia ny Best Yoga Destinations | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Ny Ultimate Torolalana ho an'ny Italia ny Best Yoga Destinations
Ny Ultimate Torolalana ho an'ny Italia ny Best Yoga Destinations
ny Miriam Cihodariu
Fiaran-dalamby any Italia
(Last Nohavaozina: 24/03/2020)
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Italia ho toy ny vakansy toerana dia fa tsy zavatra fotsiny ny siny rangotra, ratra kely eny list. Afaka niverina tany Italia indray ary indray, ary mbola tsy ampy ny amin'io tany sy ny matsiro manjo, na ho leo sy ny ny tantara sy ny kolontsaina.
Toy izany ny hatsarany ity vatosoa Mediterane ny firenena izay manome saika misy karazana vakansy dia afaka mieritreritra. Ny mpitari-dalana ankehitriny dia hifantoka amin'ny toerana ny yoga Italiana. fa, na dia raha ianao handeha ho ny yoga fisintahana, sarotra ny tsy miraharaha ny sisa Italia ny zava-mahagaga.
Ny sakafo dia mazava ho azy fa ho avy ao an mifantoka hatramin'ny italiana nahandro no eo amin'ny tsara indrindra eo amin'izao tontolo izao sy ny firenena ihany koa ny toerana malaza ho an'ireo liana amin'ny culinary vakansy. Ny fahazavana faritra an-tendrombohitra miaraka mahafatifaty dranomasina koa ny Italia ny toerana malaza for bisikileta fety, tsy lazaina intsony ny filan'ny nofo fa maro surfers mitana azy io.
Italia Indray mito
In 2017, ny rakitsoratra-Breaking 60 tapitrisa ny mpizaha tany nitsidika ny firenena. Italia dia toy izany toerana malaza fialan-tsasatra noho ny antony roa lehibe. Voalohany indrindra, ny hatsaran-tarehy voajanahary ny saika tsirairay sy ny tanàna rehetra sy ny faritra amin'ny tany dia manaitra Italiana. Ianao dia manana talaky masoandro tanim-boaloboka maitso mavana eo amin'ny havoana, mahatalanjona tendrombohitra, ary koa ny be dranomasina amin'ny awesome hilalao onja toerana mafampana ary mahafatifaty tanànan'ny mpanjono, niova ho tsangambato ara-tantara.
Raha niresaka ny tantara, izany, raha ny marina ny antony faharoa izay mahatonga Italia toy izany toerana lehibe ho any. faritra tsirairay, tanàna sy tanàna kely Feno tantara. Toy ny toerana iaingana ny Fanjakana Romanina, Italia azo nieritreritra toy ny fandrian-jaza ny sivilizasiona. Ny lasa nanampy ihany koa ny taonjato maro ny mamokatra ilay fomban-drazana ny zavakanto sy ny kolontsaina lehibe manerana tanàna Italiana. Raha tsorina,, tsy afaka leo eto.
Zavatra lehibe iray hafa momba ny Italia? Satria ny firenena dia miray fa tara sy ny faritra nivoatra kokoa na latsaka manokana, misy eo an-toerana maro cuisinés, miavaka samy hafa noho ny hafa. Izany dia midika be dia be ianao sy miezaka nanandrana mialoha!
Verona ho any Milan Lamasinina
Ny tsara indrindra tokony hatao? Destinations Yoga tany Italia
Tuscany dia miavaka faritra iray tany Italia, ary nitady mafy ny mpizaha tany rehefa avy-. Tsy fotsiny ny faritra-firenena sakafo manokana izay mahatonga ny olona rehetra mahatsapa ho toy ny tonga any an-danitra, izany ihany koa ny tsy manam-paharoa zava ary ny toe-javatra mahavariana ny natiora. Ny tendrombohitra sy lohasaha kely eto mamorona mahatalanjona hevitra, fa izy ireo ihany koa ny toerana mety tsara ho an'ny wineries, izay Tuscany manana betsaka.
Ary noho izany, tsy tokony ho gaga ny mahita fa maro ny yoga retreats in Tuscany ihany koa ny manolotra Tsiro divay Tours, na izy ireo mihitsy aza manolotra ny yoga sy ny divay fampianarana hatrany am-boalohany, fanakambanana ny tsara indrindra roa tontolo. ny soso-kevitro? Ataovy! Ny divay dia afaka hanandrana eto sy ny mahafatifaty ambanivohitra ny Tuscany dia ho iray amin'ireo fahatsiarovana mamy sy fialan-tsasatra mandrakizay.
Milan ho Siena Lamasinina
Florence ho Siena Lamasinina
Perugia ho Siena Lamasinina
Roma ho Siena Lamasinina
Sardinia faritra malaza iray hafa, rehefa nitsidika Italia, ary marina izany. Ny maitso mavana morontsiraka mahatonga azy ho amin'ny toerana tena toerana ho an'ny yogis sy ny surfers satria manome be dia be ny tsara Surf, fa koa toerana miavaka izay hisaintsaina na hanao masoandro fiarahabana.
Nosy lehibe ity dia manana efa ho 2,000 kilaometatra ny morontsiraka, fa ny afovoan-tany koa ny faritra be tendrombohitra sy ny manome be dia be tongotra lavitra lalana, raha toa izany ihany koa eo amin'ny zavatra mahaliana. koa, tahaka ny anaran 'ny nosy dia midika, vaovao trondro sy hazan-dranomasina dia be eto, Ho tahaka izany ny tsimon'ny tsiro dia ho any koa ny Fifaliana.
Olbia ho Cagliari Lamasinina
Cagliari ho Olbia Lamasinina
Sassari ho Olbia Lamasinina
Olbia ho Sassari Lamasinina
Ny faritanin'i Ragusa indray dia ny toerana tena yoga, toerana tany Italia, ary koa ny toerana tena surfer koa (satria ny hita tao amin'ny nosy Sisila). Avy ny yoga eo amin'ny tora-pasika hijoro-up paddle ny yoga, dia afaka mahita ny zavatra rehetra irin'ny fonao ny ny yoga sy ny rano fanatanjahan-tena sy izay rehetra eo anelanelan'ny. manao Yoga in Ragusa dia recharge ny vatoaratra, indrindra fa raha mitsidika azy io tamin'ny faran'ny fahavaratra rehefa tanteraka ny tsio-drivotra sy ny masoandro dia malemy fanahy kokoa.
Messina ho Ragusa Lamasinina
Syracuse ho Ragusa Lamasinina
Taormina ho Ragusa Lamasinina
Palermo ny Ragusa Lamasinina
Ny morontsiraka Amalfi dia tsy ho trandrahana ny fitodian-tsambo sakafo matsiro na mankafy ny rano fanatanjahan-tena mandrakariva fa koa toerana tena toerana for yogis maneran-tany. Ny vato krystaly-mazava azure rano sy ny fahalemem-panahy rivotra malefaka ataovy tsara fotsiny ny yoga, na fomba fanao dia afaka mieritreritra, avy amin'ny masoandro fiarahabana ho fisaintsainana fivoriana ary na dia ny yoga dihy.
No fitsidihana Italia afaka forego Roma toy ny Travel toerana miaraka amin'ny lala andehana. The Dobo Trevi, ny Vatican, ny Roman Forum, ny Lasapelin'i Sixtine sy ny mahatalanjona valin-drihana sy ny Colisée, fa vitsy dia ny tsy maintsy fari tokony hahita raha ao.
Na dia ny an-drenivohitra, 'The Eternal City' ihany koa ny manana be dia be ny toerana milamina manodidina azy, izay indrindra ny antony yoga, retreats tany Roma dia tena malaza.
ny kanto renivohitry ny izao tontolo izao, Florence no nofy ho tanteraka raha tia mahatalanjona tranombakoka sy mahatalanjona tamin'ny Moyen Âge maritrano. ny ela, trano fotsy sy ny mahafatifaty arabe vita rarivato hahatonga anao hahatsapa toy ny ianao Renaissance tonga tao amin'ny nofy, izay indrindra inona no Florence. Ny malaza dome sy ny Uffizi Galleries ireo fa ny roa amin'ny toerana tokony hitsidika ny hahatakatra indrindra no mahatonga ny fahaterahana indray ara-kolontsaina eto Eoropa nanomboka tamin'ny faran'ny ny Moyen Âge.
Rimini ho any Florence Lamasinina
Roma ho any Florence Lamasinina
Pisa ho any Florence Lamasinina
Venice ho any Florence Lamasinina
Izaho dia manana fiaiken-keloka mba: rehefa nitsidika Venice, Nahatsapa aho fa marina mety ho tsy manan-kialofana ny olona eto, ary ho sambatra (tsy nampamoahana an'i ririnina ny fotoana, anefa). Tsy dikan'ny hoe manamaina ny tolona ny olona tsy misy fialofana, mazava ho azy, saingy fotsiny fa ny tanàna no tena tony, na dia eo aza ny fizahan-tany ny mavesatra fifamoivoizana, fa amin'ny fiadanana ianao ny lakandrano eny amin'ny fotoana rehetra. Tsapako fa afaka matory ambanin'ny lanitra misokatra eto, miaraka amin'ny balmy Zavatra alina rivotra manodidina ahy sy ny fofona any an-dranomasina, Manary ny fihinanana na inona na inona eo an-toerana manodidina trattorias manana, ary ho toy izany fotsiny, toy izany, sambatra.
Ny Romantic manonofinofy kely, Venice tsara tarehy tsotra izao sy ny tsy maintsy-mahita raha mbola teo amin'ny vakansy any Italia. Ny ela tanàna dia voafetra ho any amin'ny nosy, fa maro ireo yoga, retreats in Venice na manodidina azy izay kely bebe kokoa hiala aminy (ao amin'ny faritra vaovao ny tanàna, fotsiny manerana ny tetezana).
Milan any Venice Lamasinina
Trento ho any Venice Lamasinina
Florence ho any Venice Lamasinina
Trieste ho any Venice Lamasinina
Italia sy Yoga
Yoga tratra tamin'ny tany Italia fa vao tsy ela akory, tahaka ny firenena dia lasa bebe kokoa ny fizahan-tany sy ny fitodian-tsambo ny yoga dia miaina ny fifohazana amin'ny laza, iraisam-pirenena. Koa satria maro tamin 'ny mpizaha tany avy any Italia mitady sasany tsara fanahy-takatry ny fotoana, ary izy ireo ihany koa ny yogis, manana yoga, retreats tany Italia misy ny manaraka dingana lojika.
Satria ny firenena dia arguably ny toerana fialan-tsasatra malaza indrindra any Eoropa, tsy maninona fa ny yoga tsy nanana be loatra fakany teratany any Italia. Ny fanao tratra tamin'ny haingana dia haingana ary tsara tokoa ny afaka mahita ny yoga izao retreats in saika isan-joron'ny Italia.
Moa ve ianao vonona ny hijery Italia? ny tsara indrindra ho namany Sary Order Mampiofana ny Tickets no Save A Train
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-italy-yoga/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / izany / de na / fanononana kokoa fiteny.
Miriam is an avid world explorer and a yogi. I love exploring world cuisines and reading fiction from all over the world. When I am not busy, I expand my collection of teas and spends some time petting the neighborhood cats. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Top 10 Easy Tips Fa Train Riding Smart Everywhere
Train bola, Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina
Nahoana Isika no Tokony ho Traveling Ao Eoropa In Spring
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Aug 2020Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mey 2021Jun 2021Jul 2021
5 Tanànan'ny antoko tsara indrindra any Eropa
7 Ho any amin'ireo toerana natokana ho any Europe
7 Ny bakalorea sy ny bakalorea tsara indrindra any Eropa
10 Fihenan'ny tanàna tsara indrindra any Eoropa
10 Fialan-tsasatra faran'izay tsara indrindra any Eoropa
7 Ny kamory be indrindra any Eropa
Ny hoavin'ny fitsangatsanganana
Top 5 Fiaran-dalamby be any Eoropa
Ahoana ny fomba hahitana toerana famandrihana ankavia eto Italia
SubmitEndrika ho atolotra, mba miandry kely.